izindleko zomshini wokudoba wezinhlanzi owengeziwe umshini wokuphakelwa kwezinhlanzi komshini wokuphakela izinhlanzi China
Amandla:55KW + 1.1KW + 2.2KW izigaba ezintathu
Ikhono:700~ 800kg / h
Umshini wokudoba izinhlanzi uyimishini esetshenziselwa ukukhiqiza izilwane zasekhaya ezingaphezulu, (ukuntanta) okuphakelayo okwasemanzini nokwenqatshelwa kwezilwane.
Inqubo yokupheka eyengeziwe, ngoba kudala izinga eliphezulu le-gelatinisation yama-starches, kuphumela ekunikezelweni ngokuqina okuhle kwamanzi. lo mshini wokudoba wezinhlanzi ungakhiqiza i-'Ianwetshiwe’ okuphakelayo okuntantayo kanye nama-pellets acwilayo. Inqubo futhi ithuthukisa ukwehla komkhiqizo. Noma kunjalo, abapheki be-extrusion bavame ukuba bakhulu kakhulu futhi babize kakhulu ukuthenga nokusebenza.
Okuphakelayo okuqukethe izithako ezinjengokudla kwe-soya kanye okusanhlamvu okusanhlamvu kungenziwa kugayeke ngokwengeziwe, kanti izakhi zomzimba zitholakala ngokwengeziwe. Okuphakelayo okuntantayo kwenziwa ngokusebenzisa ama-extruders kanye nama-feed okuinza azinza kakhulu amanzi angenziwa ngawo izikhipha kanjalo. Kwezinye izimo, ama-extruders asetshenziswa nje ukulungiselela izinto zokuphakela, njengokukhuculula owomile ubhontshisi.
Ngokuyisisekelo, umshini wokudonsela amanzi okusanhlamvu okuntantayo yisiphothi eside esine-screw auger ngaphakathi eklanyelwe ngokukhethekile ukufaka izingxube ze-feed kuya ekushiseni okuphezulu kanye nengcindezi yomusi. Lapho okuphakelayo kuphuma kufa ekugcineni komgqomo, kuboshwe umusi uvunguza ngokushesha okukhulu, ama-pellets afudumele afudumele ayanda, kukhiqizwa umshini wokuphilisa wezinhlanzi ongaphezulu komhlaba ophansi, futhi ingenza okuphakelayo ngezimpawu eziningi ezahlukahlukene. Inkinga enkulu ukuthi bayabiza ukuyithenga futhi bayayigcina, futhi abakhiqizi bezokudla bondlula le ndleko ukuze bondle abathengi.
Izici Zokuphilisa Zokuphilisa Zentantayo Ezintantayo:
1. Ukusebenza okulula nokufakwa
2. Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
3. Ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo
4. Umsebenzi oqhubekayo nokuqina
5. Kutholakala ekudleni okulembayo nokushisayo kwezinhlanzi.
6. Intengo yokuncintisana
Ukusetshenziswa Nokusikisela Komshini Wokuphakelwa Kwezinhlanzi Okuphakelayo
1.Ukuhluza izinhlayiyana: Kuya ngezidingo ezihlukile zokukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zokuphaka kwezinhlanzi eziphezulu, Ama-Shrimps, zasemanzini.
2.Crabs ezikhukhumalisa granules: I-granule iqinile futhi iyindilinga, kanye nobubanzi bezimfudu ezikhukhumala zingalungiswa ngokuya ngesidingo sakho.
3.Ukukhiqiza: Okokugcwala noma okucwilisa izitshalo zamanzi, singanikeza abathengi bethu izindlela ezikhethekile ezisebenzisekayo zokuphapha zasemanzini.
4.Ubulukhuni obufanele bokuphakelwa kuzogcina ukuqina kokuphakelayo futhi kulungele ukuvikela ukungcoliswa kwamanzi.
5.Kungabulala ukondla okuphakelayo, yenza ukudla oku-pellet kube nomsoco, kulula ukumunwa.
6.Imiphumela ekhangayo isobala.
Idatha Yobuchwepheshe Yomshini Wokuphakela Wezinhlanzi Ontantayo
Ividiyo yomshini we-ext feed we-fish